HomeWararka CiyaarahaManchester United oo ku Dhibtoonaysa saxiixa Matthijs de Ligt
Daafaca dhexe ee kooxda Juventus Matthijs de Ligt ayaa lagu soo waramayaa in uu qarka u saaran yahay in uu heshiis wakhti dheer ah u saxiixo kooxda reer Italy.
22-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa Turin waxa uu dhacayaa wax ka yar laba sano, waxaana jiray warar la isla dhexmarayay oo ku saabsan mustaqbalkiisa ka hor suuqa kala iibsiga xagaaga.
Tababaraha soo socda ee Manchester United Erik ten Hag ayaa ku maamulay xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands Ajax , waxaana la rumeysan yahay inuu doonayo inuu keeno Old Trafford xagaagan.
Wariye Oriol Domenech ayaa dhawaan sheegtay in Ten Hag uu u aqoonsaday daafaca dhexe bartilmaameedka ugu horreeya ee suuqa soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Sky Italia , De Ligt ayaa ku dhow inuu soo afjaro wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalkiisa, isagoo isku diyaarinaya inuu qalinka ku duugo heshiis cusub oo Turin ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in heshiiska cusub uu socon doono illaa June 2026, iyadoo Juventus ay go’aansatay inay sii haysato xagaagan, maadaama Giorgio Chiellini uu ka tagayo kooxda marka uu dhamaado qandaraaskiisa.
De Ligt ayaa 117 jeer u ciyaaray kooxda koowaad ee Ajax ka dib markii uu soo maray nidaamka dhalinyarada ee kooxda ka hor inta uusan u dhaqaaqin Old Lady bishii Luulyo 2019.
Wadar ahaan, Daafacan ayaa Juventus u matalay 116 jeer tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay sideed gool iyo seddex caawin.
De Ligt ayaa mar kale u noqday ciyaaryahan muhiim u ah kooxda Massimiliano Allegri xilli ciyaareedkan, isagoo dhanka kale saftay 41 kulan tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay seddex gool, islamarkaana caawiye ka ahaa hal gool.
Barcelona iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale dhawaanahan loo arkaa inay xiiseynayaan daafaca dhexe, kaasoo 35 kulan u saftay Netherlands, isagoo dhaliyay labo gool.